Hultsfred - Socodka | Booqo Hultsfred
Bogga hore » 🥾 arag oo samee » 🎟️ Soo jiidasho » 🖼️ Matxafyada & bandhigyada » Hultsfred - Socodka
Sheekada Bandhig faneedka ugu caansan Iswiidhan!
Sheekooyin, sawiro iyo filimaan laga duubay kaydka muusiga Kaydka dhagaxa ee Swedish ayaa hadda loo beddelay raad socod jireed oo ku yaal dhulka dabbaaldegyada caadiga ah ee ku teedsan harada Hulingen. App-ka cusub ee la sameeyay waxa uu suurtogal ka dhigayaa in dib loo soo nooleeyo riwaayadaha iyo muusigga. Intaa waxaa dheer, waxaa la sheegay in booqdeyaashu ay halis ugu jiraan inay la kulmaan "nin-xumo" oo caan ah.
Hultsfred - Socodku wuxuu ka kooban yahay ilaa 40 calaamadood oo muuqaal ah oo ka samaysan wareegga qolka Klubben. Intaa waxaa dheer, waxaa jira app "Hultsfred - Socodka" kaas oo ka kooban muusig, filimaan filim, xaqiiqooyin iyo khibrado loo marayo tignoolajiyada AR (xaqiiqda la kordhiyay ama xaqiiqada la kordhiyay). Nuxurka abka waxa kaliya ee lagu arki karaa goobta Hultsfred, waxaana inta badan soo saaray Makerspace Hultsfred.
Beerta dadka, 577 34 Xaraf, Sverige
56 faallooyin ku saabsan Google
Nuxurkaaga Halkaan Marayaa
3/5 9 bilood kahor
Arrin nostalgia sare leh, laakiin nasiib darro guddiyada macluumaadka qaarkood waxay u muuqdaan inay baaba'een sidaa darteed qaar ka mid ah meelihii lagu calaamadeeyay barnaamijka ayaa ka maqnaa "jir ahaan".
3/5 2 sano kahor
Ok safarkaaga safka xusuusta. Faahfaahin qaar ah, sawirro iyo goosgoosyo filim ah oo ku wareegsan aaggii hore ee iidda. Waxaa la qaban lahaa wax badan oo ka sii fiican. Qaar ka mid ah sawirrada muuqaalka weyn iyo goobta, tusaale ahaan
Dhammaan xaqiiqooyinka + in yar oo dheeraad ah oo aad u baahan tahay oo khuseeya Bandhigga Hultsfred.
Si qurux badan. Miyey suuqa u jirtay markaa dad badan baa markaa jiray
Safarka nostalgia ee booqdayaasha xafladaha FD